कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ – Eps Sathi
November 30, 2021 6762
ति पि’डि’त छा’त्राले गत अगष्ट महिनामा आफ्नो शिक्षकलाई यो कुराको बारेमा बताएपछि यो सबै कुरा बाहिर आएको थियो। कुरा वाहिर आएसँगै खाङवनदो प्र’ह’रीले यस कुराको अध्य’न अ’नुस’न्धान गर्दै युनिभर्सिटीका विदेशी विध्यार्थीहरुलाई प’क्रा’उ गरेको हो। ति छात्राले दिएको ब’यान अनुसार विदेशी विध्यार्थीहरुले उनलाई ‘के गरिरहेको छौ?’ ‘तिमीलाई मिठो मिठो खानेकुरा किनिदिउँ कि’? भनेर ल’लाई फ’काइ गरेको बताएकी छिन। अहिले प्र’ह’रीले ६९ जना सबैलाई कोरिया छाड्न ब’न्दे’ज लगाई थप अनु’स’न्धान अगाडि बढाईरहेको छ।
Prevविदेशबाट आउने नेपालीले एउटाभन्दा बढि मोबाईल ल्याएमा भन्सार लाग्ने, जानौं भन्सार कति लाग्छ?
Nextकोरियनहरुको औषत आयु ८० बर्षभन्दा माथि, आखिर किन धेरै बाँच्छन कोरियन?